Soomaaliya, 19 February 2019
Dad rayid ah oo ku dhintay qarax ka dhacay duleedka Jowhar
Ugu yaraan laba qof oo shacab ah ayaa ku dhintay ka dib markii ay miino la qaraxdey gaari ay saarnaayeen dad rayid ah gelinkii dambe ee maanta.
Ileyska VOA: Takoorrida Dadka Qaba xannunada aan la is qaadsiin
Ku soo dhawaada Barnaamijka cusub oo aan ugu magcdarnay “Ilayska VOA” oo aan diiradda ku saareyno isku ceebeynta iyo takoorka cudurrada dadka ku dhaca. Waxa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Warbixin: Amniga Muqdisho iyo Nawaaxigeeda
Amniga waddooyinka isku-xira magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan ayaa lagu soo warramayaa inuu sii xumaanayo, taasoo sababtay inay dadka qaarkood ay ku safraan dhinaca badda, si ay u gaaraan magaallooyinka Marka iyo Baraawe.
Somaliland: Kun Dhalinyaro ah oo Tababar Shaqo Qaran loo Furey
Inta badan dhallinyarada Somaliland ayaa ka cawda shaqo-la'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahriibaan.
Muqdisho: Ganacsato ku hanjabtay joojinta qaadka
Ganacsatada Soomaalida ee qaadka ka keenta Kenya ayaa ku hanjabay inay jooojin doonaan soo dejinta qaadka laga bilaabo maanta.
Muqdisho: Wariyayaal ka cawdey hab dhaqanka dowladda
Koox wariyayaal ah oo maanta shir jaraa’id ku qabtey magaalda Muqdisho ayaa ka cowdey qaab dhaqanka dowladda ee ku aaddan warbaahinta madaxa bannaan.
Dhageyso Barnaamijka Qurbe
Falanqeyn: Ciidamada Burundi ee Soomaaliya ka baxaya
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu maanta u ambabaxay dalka Burundi oo la sheegay inay dhammaadka bishan Soomaaliya kala baxayaan 1000 askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM.
Hiiraan: AMISOM oo Weerartay Shabaab
Ciidamada Amisom iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa waxay hawl-gal ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyeen tuulooyin ka tirsan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.